Zeziphi izikhumbuzo oza nazo kuhambo? | Gcina A Isitimela
ekhaya > Iindawo ezinika umdla Tips > Zeziphi izikhumbuzo oza nazo kuhambo?
Ukuhamba ngololiwe eTshayina, Train Travel Czech Republic, Qeqesha uhambo eFrance, Qeqesha uhambo eJamani, Uloliwe kuhambo Italy, Ukuhamba ngololiwe eRashiya, Uloliwe eSwitzerland, Qeqesha uKhenketho e-UK, Travel Europe, Iindawo ezinika umdla Tips
(Wagqibela ukuhlaziywa nge-: 03/09/2021)
Ngaba ungalukhumbula lonke uhambo okhe waluthatha, izimvo ozithandayo, kunye nokutya okuye wakungcamla? Mhlawumbi akunjalo, yiyo loo nto izikhumbuzo ziyindlela efanelekileyo yokwenza ezo nkumbulo zihlale ixesha elide ebomini. Zeziphi izikhumbuzo oza nazo kuhambo? Nazi ezona zimvo zilungileyo zokuzikhumbuza isiqwenga sepharadesi ekhaya.
Izikhumbuzo Zokuzisa Uhambo: Izithako zokupheka
Izinongo, isosi, imifuno, iya kukubuyisela ngqo kwiincasa, ivumba, namaxesha aloo ndawo ikhethekileyo. Kuyafakazelwa ukuba sikhumbula kakhulu ngokusebenzisa izivamvo zethu, kwaye ukutya yeyona ndlela ilungileyo yokufumana indawo. Ngaphezu, Izinto zokupheka ziya kwenza abahlobo bakho kunye nosapho bazive ukuba bebekhona kunye nawe.
Amayeza amaTshayina, isosi yepasta, Kwaye ipasta zizikhumbuzo ezintle zokubuyisa kuhambo oluya eChina, okanye e-Itali, umzekelo. ke, khumbula ukupakisha ibhegi eyongezelelweyo ngenxa yeefiey, kuba kungcono ukupakisha ezizikhumbuzo zimnandi ngokwahlukeneyo. Awunqweneli ukuvula ityesi yokufumanisa iimpahla zakho zikwi-red paprika shades.
Ukuxhasa inkcubeko yendawo kunye namagcisa kukubonisa ukuba ungumhambi onolwazelelelo kwaye okrelekrele. Izitya zeesosi ezenziwe ngesandla, iimpahla zetafile ephothiweyo, okanye iihempe zelokhwe ezimfakamfele zizikhumbuzo ezintle abahlobo bakho abaya kuzixabisa, ukusebenzisa, kunye nendlela entle yokubonisa umbulelo kuluntu olukubambeleyo.
Ubugcisa basekhaya sisikhumbuzo esihle sokubuyisa kulo naluphi na uhambo eYurophu nase China. E China, unokufumana izibane ezibomvu zethamsanqa, ukusuka eRashiya a ngezandla Domovichok eya kulinda ikhaya lakho okanye iglasi yebhiya epholileyo esuka ePrague kumalume okanye umntakwabo othanda ibhiya. Esinjani isangqa esikhulu travel Eco-friendly, ukwamkela, nokusasaza inkcubeko emangalisayo kwihlabathi liphela.
Ukuhonjiswa kwasekhaya Izikhumbuzo
Yenza uhambo lwakho lube yinxalenye yekhaya lakho, ngentyatyambo entle iDelft vase okanye itulip yokhuni evela eNetherlands. Izikhumbuzo zemihombiso yasekhaya zinokwenziwa ngezandla, kwaye amaxesha amaninzi babalisa amabali enkcubeko kunye nembali yemvelaphi yabo.
Ipleyiti yodongwe eludongeni, yikristale bohemian evela Czech Republic, okanye iwotshi yecuckoo ukusuka Black Forest zizikhumbuzo ezinkulu zokuzisa ekhaya kuhambo lwakho oluya eYurophu.
Rimini ukuya eFlorence ngoLoliwe
IRoma iya eFlorence ngoLoliwe
Pisa kuFlorence ngoLoliwe
IVenice eya eFlorence ngoLoliwe
Isikhumbuzo sokuzisa kuhambo: Utywala bendawo
Ukwabelana ngamabali ukusuka kuhambo ngaphezulu kweglasi yotywala obulungileyo kunceda ukukhumbuza kuzo zonke iinkcukacha ezinencindi, kunye namaxesha amnandi. Ukuzisa utywala bendawo sisikhumbuzo esithandwayo sokuza eYurophu, ngakumbi ukuba yi Isiselo esinxilisayo sonke kufuneka sizame kwihlabathi liphela.
ke, Limoncello wase-Itali, okanye iRiesling iwayini evela kwithafa yaseRhein eJamani, ngolunye uhlobo, abo bamkelayo baya konwaba ukufumana eso sipho. Ukuba awuqinisekanga ukuba yintoni isiselo sasekhaya, Nika ingqalelo kwiiglasi kwitafile zabahlali ngexesha lesidlo sangokuhlwa okanye ubuze kwibar yendawo.
Ubucwebe yindlela emangazayo yokuhambisa uhambo lwakho lusondele entliziyweni. Isacholo somqala, Amacici e-amber avela ePoland, okanye isongo esinomtsalane sesilivere, ziingceba ezingaphumiyo kwisitayile, nangaphezulu, aziphelelwa lixesha.
ke, ukuba unomdla wokuzisa isikhumbuzo esingaqhelekanga, ke izacholo zigqibelele. Ukongeza umtsalane kwisongo sakho esivela kulo lonke ilizwe utyelelo luyamangalisa. kunjalo, xa uthenga ubucwebe kwilizwe langaphandle, lumka malunga nokuphatha imali kwaye ungangeni kuyo nayiphi na ezobuqhetseba zokuhamba ezithandwayo kwihlabathi liphela.
UDijon ukuya eProvence ngoLoliwe
EParis ukuya eProvence ngoLoliwe
ILyon eProvence Ngoololiwe
IMarseilles ukuya eProvence ngololiwe
Ulibale ii-keychains kunye neeposikhadi, ukuba abahlobo bakho ngabaqokeleli, akukho nto ithi ndiKhathalele ngaphezu kwesiqwenga esisodwa abanokongeza kwingqokelela yabo. Wonke umntu uqokelela into: ikomityi yebhiya ehonjisiweyo esuka ePrague, Umfanekiso weglasi kaMurano, I-Russian Babushka ukuya kwiidrafiki, kwaye le yimizekelo nje embalwa.
Ngaphezu, iiglasi zokudubula, iminqwazi, kunye nezikhonkwane zezinye izinto ezoyikisayo zokukhumbuza ukubuyisa ukusuka kuhambo oluya eYurophu. Kuxhonywe eludongeni, esetyenziswa kumaqela, okanye igcinwe kwi-albhamu, abahlobo bakho bayalixabisa ixesha olichithe ukhangela loo nto ithile ikhethekileyo kunye nebali elisemva kwayo.
Ukuphatha okumnandi kunye nokunomdla kuya kubeka uncumo kwaye kubambe ingqalelo yomphulaphuli. Ukutya yeyona ndlela ifanelekileyo yokufumana indawo, kuzo zonke iincasa ubani ahambela inkcubeko kunye namabali. Umzekelo, IParis IiMacarons ayizizo nje izikhumbuzo ezimnandi. Bakwasasaza ubume kunye nomoya woHlaziyo lwaseFrance kwimfezeko yabo, ifom eqaqambileyo eqaqambileyo.
ke, ngelixa ukuluma okumbalwa kusenza esi sikhumbuzo sinyamalale, incasa kunye nemvakalelo emangalisayo kuhlala nathi ngonaphakade. Iimvakalelo zethu ziya kuhlala zikhumbula ixesha lokuqala esazama ngalo itshokholethi yaseSwitzerland, kunye nabamkeli besikhumbuzo sakho esimnandi bayakukhumbula. Ukushwankathela, Izikhumbuzo ezimnandi sisikhumbuzo esimnandi sokubuyisa kuhambo oluya eYurophu.
Izikhumbuzo Zokuzisa Uhambo: clothing
Ukuthenga yenye yezona zinto zibalaseleyo zokwenza phesheya. Ungasitshintsha isitayile sakho, yongeza into ekhethekileyo kwikhabhathi yakho enje ngesikhafu esimibalabala esivela eRashiya, ibhatyi yesikhumba evela e-Itali, kunye nokuninzi. Ukuba ucwangcisa ukuzisela abahlobo bakho isinxibo, ke kuya kufuneka usazi isitayile kunye nobungakanani babo.
kunjalo, zininzi izikhumbuzo zempahla onokukhetha kuzo eYurophu, ezingabandakanyi ukhetho lobungakanani. IBerlin ilungele Ivenkile yokuvuna, Iikipa ezivela kwiimarike zezitalato zaseLondon, iqhina elipholileyo elivela eParis okanye e-Itali, zizimvo nje ezimbalwa zezikhumbuzo zezambatho zokuzisa ezivela kwihlabathi liphela.
Izikhumbuzo zeCliche zokuzisa kuhambo oluya eYurophu
Awusoze uhambe gwenxa ngezikhumbuzo zakudala. Umzekelo, abahlobo besipho kunye nosapho isitshixo se-Eiffel Tower, I-Matryoshka yamaplanga yaseRussia, okanye ii-clogs ezenziwe ngomthi ezivela eAmsterdam, ezi ziya kuba sisikhumbuzo esithandekayo nesicingisisiweyo. Ngaphezu, ungazithenga ezi zikhumbuzo zakudala zaseYurophu kwisikhululo seenqwelomoya, okanye Isikhululo sikaloliwe, ngomzuzu wokugqibela. kunjalo, zithathele ingqalelo ezo zikhumbuzo’ Ixabiso liya kuba phezulu kakhulu kwivenkile yesikhululo sikaloliwe, ngaphezu komzi.
Apha Gcina A Isitimela, Siya kukuvuyela ukukunceda ucwangcise uhambo olungalibalekiyo eYurophu. Unga lula ukuhamba ngololiwe ukuya kuyo nayiphi na indawo eYurophu, Ivenkile kunye nokonwabela uhambo olulula kuya kuba iisutikheyisi ezizele ubuncwane kunye nezikhumbuzo.
Ngaba uyafuna ukufaka iposti yethu yebhlog “Zeziphi Izikhumbuzo Zokuzisa Kuhambo?”Kwisiza sakho? Ungakhetha noba inanilethu iifoto kwaye okubhaliweyo kwaye asiphe credit kunye unxulumaniso kwesi hetalia us. Okanye nqakraza apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fxh%2Fsouvenirs-bring-trip%2F - (Skrolela phantsi kancinci ukuze ubone Code lungisela)
Yintoni Le Cheese Best Europe anikele
Qeqesha uhambo eFrance, Uloliwe kuhambo Italy, Uloliwe eSwitzerland, Travel Europe
Uloliwe wokuhamba eBelgium, Ukuhamba ngololiwe eTshayina, Train Travel Czech Republic, Qeqesha uhambo eFrance, Qeqesha uhambo eJamani, Uloliwe kuhambo Italy, Qeqesha uhambo ePortugal, Uloliwe eSpain, Iingcebiso zokuhamba, Qeqesha uKhenketho e-UK, Travel Europe